ICC Cricket World Cup 2019 Android အတွက်ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » အားကစား Apps ကပ » ICC ကခရစ်ကက်ကမ္ဘာ့ဖလား 2019
ICC ကခရစ်ကက်ကမ္ဘာ့ဖလား 2019 APK ကို
အဆိုပါ ICC ကိုအမျိုးသားများရဲ့ခရစ်ကက်ကမ္ဘာ့ဖလား 2019 များအတွက်အရာရှိတဦးကပြိုင်ပွဲ app ကိုမဖြစ်မနေ-ရှိသည်! ငါတို့သည်သင်တို့သတင်းဆောင်ကြဉ်းအဖြစ်တစ်ရက်ပုရစ်ရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ရပ်အဘို့ဤသည်သင်၏တစ်နေရာတည်းမှာဦးတည်ရာကိုအောင်, ဂိမ်းကလစ်များ, ဗွီဒီယိုပျေါလှငျ, သီးသန့်ပုံပြင်များ, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှရမှတ်များနှင့်ကျော်-by-ကျော် updates များကိုထဲတွင်လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုအခိုက်လက်လွတ်မနေပါနဲ့။
သတင်းများ, ကြည့်ရှုနိုင်သော, ပျေါလှငျ, အင်တာဗျူးနှင့်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုရောနှောရာပူဇော်သက္ကာကိုကျွန်ုပ်တို့၏အတွင်းလက်လှမ်းမီသင်သည်သင်၏အကြိုက်ဆုံးကစားသမားများနှင့်အစဉ်အဆက်ထက်ပိုကောင်းတဲ့အသင်းတွေကိုသိရဖို့အတှကျဤသီးသန့်ပလက်ဖောင်းစေသည်။ app ကိုပေါ်အကြိုက်ဆုံးခလုတ်ကိုနှိပ်နှင့်သင့်အတှေ့အကွုံ personalize မှချက်ချင်း updates များကိုလာပြီအားဖြင့်သင့်အဖွဲ့ကိုထောက်ပံ့။
သင်တစ်ဦး trivia ခွံမာသီးဆိုရင်, သင့်အသိပညာစမ်းသပ်ဖို့ပဟေဠိအပိုင်းကူးခေါင်း။ အဆိုပါလွမ်းဆွတ်များအတွက်အကြီးမြတ်ဆုံးခဏသင်သည်သင်၏အကြိုက်ဆုံးအမှတ်တရများ relive, ဒါပေမယ့်လည်းထိုသူတို့အဘို့မဲပေးနှင့်သင့် All-အချိန် CWC XI ရွေးဖို့သာခွင့်ပြုသည်။
ယခု Download များနှင့်ကမ္ဘာ့အကြီးကျယ်ဆုံးပုရစ်အခမ်းအနားအဘို့အဆင်သင့်ရ!
တိုင်းဂိမ်း * ကရိယာ, ရလဒ်များကို, စာရင်းများနှင့်နေရာသတင်းအချက်အလက်များ
တစ်ခုချင်းစီကိုယှဉ်ပြိုင်အမြိုးအတှကျ * Dedicated အသင်းနှင့်ကစားသမားစာမျက်နှာများ
* သင်အကြိုက်ဆုံးအသင်းကိုလိုက်နာပါနှင့်သတင်း, ဗွီဒီယိုနဲ့ပျေါလှငျသငျသညျမှကယ်နှုတ်ရ
* သင်အကြိုက်ဆုံးကစားသမားကိုရွေးချယ်ပါနှင့်သင့်ကိုအကောင်းဆုံး-အစဉ်အဆက်ခရစ်ကက်ကမ္ဘာ့ဖလား XI ရှေးခယျြခဲ့
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြီးမြတ်ဆုံးခဏဗီဒီယိုက archive ကိုအပိုင်းကနေတဆင့်သင့်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးကမ္ဘာ့ဖလားခဏ * Vote
အင်္ဂလိပ်, ဟိန္ဒူ, ဘင်္ဂါလီများနှင့်ဒူအတွက် * Follow သတင်းနှင့်ဗီဒီယို
ကိုယ့်နှစ်ပတ်အတွင်းသွား ICC ကအမျိုးသားများရဲ့ခရစ်ကက်ကမ္ဘာ့ဖလားနှင့်အတူကျနော်တို့အင်္ဂါရပ်များတစ်ခုလုံးစည်းဆက်ပြောသည်ပြီ
- အင်္ဂလိပ်, ဟိန္ဒူ, ဘင်္ဂါလီများနှင့်ဒူအတွက်သတင်းနှင့်အတူလေးဘာသာစကားများအတွက်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုကိုလိုက်နာပါ
- သင်လိုအပ် updates များကိုပေးဖို့အမှတ်တံဆိပ်အသစ်ကအကြောင်းကြားစာဝန်ဆောင်မှု
- တစ်ဦးပွဲစဉ်မှ Going? အထဲကသင့်ရဲ့တစ်နေ့တာတိုးတက်လာဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိုး selector ထုတ်စစ်ဆေး
ICC ကခရစ်ကက်ကမ္ဘာ့ဖလား 2019
34.99 ကို MB
Cricout ခရစ်ကက် ...
ဖီဖာ - ...